Enterprise - inzuzo - inzuzo
Ukwenza ibhizinisi ngendlela umnotho emakethe, ke sihlose ukwenza ibhayisikobho engenisa inzuzo, okuyinto inkomba main, obhekene ibhizinisi ukusebenza. Empeleni, kuba nesilinganiso, okuyinto lihlela isilinganiso phakathi kwama inzuzo futhi ngezindleko owenziwe iyunithi ngayinye ukukhiqizwa. Nenzuzo ingabalwa ngenxa ezindaweni ezahlukene ibhizinisi, ezifana inzuzo abasebenzi, okuyinto ebonisa ukusebenza umsebenzi maqondana nempahla eye yasetshenziswa kuso ngesimo ama-ovaloli, nosizo lomphakathi, inhlangano yomsebenzi nabanye.
Inzuzo nekghono zihlobe-, kusukela sakamuva singabangela njengendlela wokukhulisa kuqala futhi aveze izinkinga yenkampani. Ngaphezu kwalokho, inzuzo ivumela ukuze bafeze imisebenzi ahlukahlukene asetshenzisiwe ukuthuthukisa ibhizinisi njll
Inzuzo emkhakheni imvelo okudayisa, inani layo Imininingwane kunqunywa ratio inani nzuzo imali isikhathi esithile. Kodwa kulokhu ucabangela inzuzo etholakala kuphela kusukela ukudayiswa kwezimpahla, net nezinye izindleko, okungukuthi, kuziwa ezingeni inzuzo yokuthengisa. zezomnotho aseYurophu nokuhlola ngokunembe kakhudlwana isetshenziswa isilinganiso somholo wonyaka.
Ezweni umkhuba inzuzo - lonke uhlelo izinkomba ezivumela elichaza ukusebenza ezezimali nezomnotho ibhizinisi. Kulesi simiso, numerator kuyinto ibhalansi kanye inzuzo net noma inzuzo evela ukuthengiswa kwempahla.
Inzuzo nekghono ukudlala indima ebalulekile ukuhlaziya of inzuzo yokuthengisa, okuyinto ucubungula izindleko-ukusebenza kwe-umkhiqizo othize noma ububanzi imikhiqizo. Kuyadingeka ukucacisa ngokunembile ukusebenza ezindaweni ebhizinisini ngamunye umsebenzi kuyo nokuzimisela inzuzo ngezizathu ezifana. Uhlaziyo ikhomba izimpahla nge sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe ongaphakeme, high kanye ezingenanzuzo ngayinye imikhiqizo, okuvumela umphumela ukuthatha izinyathelo ngcono inzuzo futhi sandise ukukhiqiza kwezimpahla onokuncintisana okukhulu.
Ukusebenza kahle kwebhizinisi ayikwazi ukucaciswa ke ukuthi, lokho kwaba inzuzo kuthengiselana, ngokuvumelana nomqondo wakhe noma degree of inzuzo. Ngenxa yalezi zinjongo ezifana isibonisi ezingeni inzuzo. Kulokhu ohlangothini isethwe imiqondo emibili:
- nenzuzo kokubili Inkomba qualitative kolichesvtenny
- inzuzo - esigabeni kwezomnotho.
Inani ezingeni inzuzo akukhona ukuthi kubaluleke kuphela ukuphathwa, kodwa futhi ngoba abasebenzi. Kubo kuba inkomba ukuzinza nethemba ngekusasa. Yingakho kungcono ukuba sifeze nokukhokhwa amabhonasi ezengeziwe kanye nemiklomelo abasebenzi. Lokhu-ke ikhuthaza ugqozi omuhle ngomsebenzi olunye.
Ayikho inkomba ezingabalulekile kangako ukuphathwa, ikakhulukazi okuhlangene isitokwe. Kulokhu, kuba inzuzo kuthengiselana (okungukuthi, imali elivezwa ukuthuthukiswa inkampani kusukela nomnikazi oyedwa) kutsi banini ngamunye noma umnikazi, njengoba nephuzu is guarantor of ngokunemba izimali utshalomali. Inzuzo kuthengiselana akuhileli nje kuphela ukuthola izinzuzo ezinhle, okuzuzisayo abanikazi, kodwa futhi ngobuholi, okuyinto efuna avumelana ukwethulwa izindleko zezimali ezintsha ukuthengwa imishini, kuvuleke amathuba emisebenzi emisha nokuningi.
Enye yezindawo ebaluleke kakhulu umsebenzi kutfola inzuzo izisebenzi ibhizinisi. Kulinganiselwa kwezibalo, 20% of the abasebenzi ukuletha nomholo eziyisisekelo, nabo bonke abahlanganyeli kule nqubo, nakuba imisebenzi yabo, kodwa kungabalulekile kangako. Kuyinto kusuka kule yunithi neuropathy kumele ilahlwe esimweni esibucayi. Ngokuvamile, izindleko-ukusebenza kwabasebenzi kuzomele sifake ukuhlolwa kokusebenza kahle isisebenzi maqondana nezindleko kwayo okuqukethwe.
Kufinyeta, singasho ngokuqiniseka ukuthi margin - isakhi kubalulekile ophethe ukusebenza izingxenye zebhizinisi ngamanye.
Coolants: Izici kanye nokubuyekeza
Wempi enkulu kunazo zonke emhlabeni. yempi Russian. I yempi entsha
Ukubeka ka iphayiphi: amasu, izidingo imishini. indawo yokuphepha Pipeline
Plate ukushisa: isimiso yokusebenza. Plate ukushisa: iyunithi
Park Hotel "Volzhskaya Riviera", Saratov: ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Ubuhlungu bekhanda kusukela izimbangela rebenka.Osnovnye
Endaweni Amphibians Samara: emhlabeni esiyingqayizivele
Figure Shirataki: izimfihlo Ukwakheka ukupheka
Ukulwa Amathe - isikhali ukufa
Hyperplasia umdlavuza endometrial
Kusho "i-Chondroitin sulfate". Incazelo. Isicelo
Boudoir ingubo: kanjani futhi kuphi ukukhetha onobuhle umkhiqizo ezihlukahlukene
Oliviya Uayld: A Biography futhi Umsebenzi
Umgomo yokulwa nesimungumungwane, mumps ne-rubella Izibuyekezo 'Priorix'